एजेण्डामा बहस हुँदैन, जहीँतहीँ भोड्काकै चियर्स ! - HAMRO YATRA
एजेण्डामा बहस हुँदैन, जहीँतहीँ भोड्काकै चियर्स !
एकथरी साथी छन् चुनावको ‘ढ्वाङ्’ दैख्नै नहुने । उनीहरुलाई ‘मतपत्र’ छाप्ने हतार भइहाल्छ । बोक्नु पनि कति बोक्नु उनीहरुलाई ? भोट पनि कतिपटक के–केमा लामवद्ध भएर खन्याउनु ? लेख्दै गर्दा मनले गुन्गुनाइरहेछ नारायण गोपलको गीत यसरी- ‘.... मेरो उठ्ने पालो !’